Faah faahin:- Dagaal culus oo gobolka Gedo ku dhexmaray ciidanka dowladda iyo Al-shabaab – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal culus oo gobolka Gedo ku dhexmaray ciidanka dowladda iyo Al-shabaab
Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal aad u culus oo deegaanka Birta Dheer ku dhexmaray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab.
Deegaanka Birta Dheer oo qiyaastii 20km u jirta magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo ayaa la sheegayaa inay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab.
Dagaalkaasi ayaa la sheegayaa inuu ku bilawday weerar ay ciidamada dowlada federaalka ku qaadeen deegaanka Birta Dheer, kadib markii ay ka war-heleen inay halkaas isku uruursanayeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab.
Taliyaha guutadda 9-aad ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya G/Dhexe Maxamed Cabdow Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarkaasi ay qaadeen ciidamada dowladda islamarkaana ay ciidankooda kaga dhaawacmeen 3 askari iyo dhaawac 4 kale.
Sidoo kale, wuxuu taliyaha sheegay inay dileen ilaa 14 ka tirsan dagaalyahanadda Al-shabaab, isla-markaana ay dhaawaceen 17 kale.
Dhinaca kale, wuxuu taliyaha tilmaamay in haatan ciidankooda ay ku sugan yihiin halkii lagu dagaalamay ee ahaa deegaanka Birta Dheer ee gobolka Gedo.
Ma jirto war kasoo baxay saraakiisha Al-shabaab, kaas oo ay kaga hadlayaan dagaalkaan ay deegaanka Birta Dheer kula galeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana ay dowladdu sheegtay inay tiro badan kaga dishay dagaalka.